ဂါလာစတာရီကလပ်ဥက္ကency္ဌအဖြစ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ကြေငြာခဲ့သူအိုဇန်ကော့ကွတ်သည် TRT ရေဒီယို ၁ မှaည့်သည်ဖြစ်သည်။ Fatih Terim အားသူ၏ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကတိတော်၌အခွင့်အာဏာပိုမိုပေးသင့်ကြောင်းအလေးအနက် ပြော၍ Ozan Korkut မှအောက်ပါထုတ်ပြန်ချက်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
“Fatih အသုံးအနှုန်းဟာအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ Galatasaray ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ပါ။ ကျွန်တော်သမ္မတဖြစ်လာတဲ့အခါ Galatasaray Sportif AS မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးချင်ပါတယ်။ နည်းပြအဖြစ်လည်းပါ ၀ င်ပါတယ်။ ဆရာရဲ့ဘဏ္situationာရေးအခြေအနေကိုရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်၊ သမ္မတမဟုတ်ဘဲအားကြီးသောသမ္မတသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဂလာတိဆာရာအတွင်းမှလာသည့်သမ္မတသည်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်စွာချမှတ်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးအသင်းကိုရရှိခြင်းသည်အားကြီးသောသမ္မတဖြစ်သည်။
Mustafa Cengiz ၏အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝေဖန်သူ Ozan Korkut၊ “Mustafa Cengiz အုပ်ချုပ်ရေးကိုငါအောင်မြင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါစီမံခန့်ခွဲမှုကိုမထုတ်ပေးခဲ့ဘူး။ ငါအထွေထွေညီလာခံထဲမှာဆောင်းပါး ၃ ခုပြောခဲ့တယ်။ Galatasaray ရဲ့အခြေခံမူတွေနဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကောင်းကောင်းကိုယ်စားပြုပါသလား။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကဆိုပါတယ်စီမံကိန်းများကိုဘယ်နှစ်ယောက်ခဲ့ကြသနည်း 30 စီမံကိန်းများကိုသာအနည်းငယ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဝင်ငွေထုတ်လုပ်ပြီးမဟုတ်ပါကလွှဲပြောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုရေးဆွဲအနာဂတ်အစီအစဉ်ကဘာလဲ? ဤပစ္စည်းမလုံလောက်သောကြောင့်ငါကဖြန့်ချိမပြုခဲ့။ ငါကမည်သူမဆိုဝတ်ဆင်ဖို့မဟုတျပါဘူး, ဒါပေမယ့်အမှားတွေကိုပြင်ပေးဖို့ “ အသုံးပြုခဲ့သည်။
RESTBET501 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETBABA138 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ SUPERBAHİS489 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETBOO618 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETPAS423 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETPAS423 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ RESTBET501 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI! RESTBET501 JİMMY DURMAZ FATİH KARAGÜMRÜK YOLUNDA RESTBET501 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ RESTBET501 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI!
9 Comments on RESTBET501 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’
EYÜP December 1, 2020 at 12:30 pm
restbet casino en yeni adresi bu oldu burdan girin amk.
ÖZGÜR December 2, 2020 at 12:10 pm
TANER December 4, 2020 at 10:20 am
CENK December 6, 2020 at 5:50 am
KraLiÇe December 8, 2020 at 3:10 pm
PERVER December 9, 2020 at 2:10 am
BAŞAK December 14, 2020 at 8:00 am
ÇİLE December 14, 2020 at 1:00 pm
UTARİT December 15, 2020 at 12:30 am